Fikarohana momba ny firaisana Aretin-koditra Syriana any Libanona: Ilay trangan'aretina teraka tao Druze an'ny Hasan Hamed | Salem Andary - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ny fiainana sy ny fahafatesan'ny Hasan Hamed
Hasan Hamed no hany zanak'i Mahmoud Hamed sy Hniyye vadiny. Teraka tany amin'ny 1927 izy tao amin'ny tanànan'i Era, any Syria, izay eo anelanelan'ny tanànan'i Krayye sy Sweida. Maty ny rainy fony izy mbola zazalahy ary i Hasan dia nandeha niara-nipetraka tamin'ny zokiny lahy tao Krayye, izay niasa tamina tantsaha, mikarakara tanimboaloboka sy miompy omby.
Hasan dia Druze: Vondrona iray izay manaiky ny firaisana amin'ny vatana vaovao
Krayye dia ao amin'ny faritra atsimon'i Syria fantatra amin'ny anarana hoe Djeble Druze, izay nonenan'ny vahoaka Druze, izay foko Arabo teraka, izay ahitana ny foto-pinoana momba ny vatana vaovao indray ny finoany. Ny fianakavian'i Hasan dia mpikambana ao amin'ny Druze. Ny sary misy ny lehilahy Druze amin'ny fanao nentin-drazana dia omena etsy ambony. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Ny governemanta Siriana tamin'izany fotoana dia notafihan'ny Frantsay sy teo anelanelan'ny 1925 sy 1927, ny Druze dia nanangana fikomiana miaramila tamin'ny Frantsay. Ny mpitarika ny fikomiana dia ny Sultan Pasha Atrash. Na dia tsy nahomby aza izany revolisiona izany, dia lasa mahery fo ho an'ny vahoaka Druze ny Sultan. Na dia teraka tany amin'ny faran'ity fikomiana ity aza i Hasan, i Hasan dia efa nahalala momba ny Sultan Pasha Atrash noho ny toerany maherifo teo amin'ny Druze. Isaky ny Sultan dia nanodidina an'i Djeble Druze, dia nisy mpanohana maromaro nitaingin-tsoavaly nitondra azy.
Raha momba ny 15 taona i Hasan, iray tamin'ireo havany dia namono Bedouin iray tao amin'ilay faritra. Ny Bedouins dia vondron'olona arabo mpifindrafindra monina monina any amin'ny faritra avaratr'i Afrika Avaratra, ny Peninsula Arabo, Irak ary Syria. Ny teny hoe Bedouin dia avy amin'ny teny arabo hoe "badawi", izay midika hoe "mpiandry tany efitra". Mizara ho foko ireo olona ireo, izay tafavoaka velona amin'ny osy sy rameva. Ny Bedouins dia mora fantatra fa noho ny akanjo miavaka izay ataony, izay aseho amin'ny sary eo ankavanana.
Ao amin'ny kolontsaina Bedouin tamin'io vanim-potoana io, raha nisy namono ny iray tamin'ireo mpikambana, ny foko dia hamono ilay mpamono olona na ny fianakavian'ny mpamono olona.
Na dia teo aza ny loza naterak'izany, dia nangataka azy ireo ny dadatoan'i Hasan mba haka biby fiompy avy any Krayye mankany amin'ny tsena any Sweida. Vondron'olona Bedouins nanenjika an'i Hasan teny an-dalana ary nanipy azy tao amin'ny lavaka fantsom-pitotoana iray ary avy eo dia nanipy vato teny amin'ny vatan'i Hasan mandrapahatonga azy tsy hiala. Maty tamin'ny Jolay 30, 1942 i Hasan.
Nahitana ny vatany telo andro taty aoriana ary hita fa nisy ratra lehibe teo amin'ny lamosin'ny loha, na dia nisy ratra teo amin'ny soroka roa aza.
Hasan dia novonoina tany Syria sy ny Reincarnates tany Libanona
Salem Andary dia teraka tany Fallujah, Lebanon tamin'ny 4 Novambra 1944, roa taona mahery kely taorian'ny nahafatesan'i Hasan. Fallujah dia 15 kilometatra atsinanan'ny Beirut, any an-tendrombohitra Libanona. Ny rainy, tantsaha, dia Najm Andary ary ny reniny dia Bahiyya. Fotoana fohy taorian'ny nahaterahany, dia nanamarika fantsom-bokatra malaza iray teo an-damosin-dreniny ny reniny, izay noheveriny ho karazana marika nahaterahana.
Rehefa nanomboka niteny izy, ny teny voalohany nataon'i Salem dia "Bedouin," "vato", ary "namely." Ny iray amin'ireo fehezanteny voalohany dia: "Sultan dia mamono betsaka."
Rehefa feno efa-taona izy, dia nanome tsipiriany momba ny fiainany taloha. Nilaza izy fa Hasan Hamed no anarany ary velona tany Krayye. Salem dia nitantara fa naman'i Sultan Pasha Atrash izy ary namaritra ny fahefana sy ny satan'ny sultan. Isaky ny mahita an'i Salem kely vitsy an'isa polisy na miaramila mandehandeha ao anaty vondrona iray, dia niantso izy hoe: "Tonga ny Sultan Atrash." Izany dia fahatsapana avy amin'ny fiainany taloha tahaka an'i Hasan izay nanatri-maso ny Sultan Atrash sy ny manodidina azy.
Nilaza i Salem fa fony izy mbola velona dia izy irery no zanaka lahin'ny ray aman-dreniny. Nilaza izy fa maty ny rainy. Nanazava i Salem fa nanana dadatoany izy ary nikarama tanimboaloboka teo amin'ny fiainany taloha. Ireo fanambaràna ireo dia marina ho an'ny fiainan'i Hasan Hamed. Nilaza ihany koa i Salem fa nitazona basy tao ambadiky ny varavaran'ilay trano nipetrahany izy.
Salem dia mahatadidy ny famonoana sy fahafatesana ho an'ny fiainany taloha
Raha ny fahafatesany taloha dia nilaza i Salem fa nisy dadatoany namono Bedouin ary vokatr'izany dia nanonofy ny Bedouins. Ny tsy fitovian-kevitra kely dia ny filazana fa namono ny Bedouin ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, fa tsy dadany.
Notantarain'i Salem fa taorian'ny fahafatesan'ny Bedouin dia navelan'ny dadatoany irery izy hitondra ondry avy any Krayye mankany amin'ny tsena any Sweida. Nilaza i Salem fa nanao izany, ny dadatoany dia namono azy ho faty. Eny tokoa, ny famonoana ny Bedouin dia nitranga tamin'ny vanim-potoana nahatongavan'ireo biby hoentina amidy. Araka izany, ny Bedouins dia afaka matoky fa ny iray amin'ny fianakavian'i Hasan dia handeha amin'ny làlambe avy any Krayye ka hatrany Sweida amin'ny fotoana nanafihana azy. Araka izany, ny dadatoany dia nanangana an'i Hasan ho zanak'ondry sorona ho an'ny Bedouin mba hanonerana ny famonoana ny havan'izy ireo Bedouin.
Salem dia nilaza fa nitaingina soavaly i Hasan rehefa nanafika azy ny Bedouins. Nolazainy fa nanandrana nandositra izy, saingy nihanihena ny soavaly ary nentin'ny Bedouins niaraka taminy. Nolazainy fa nokapohiny tamin'ny klioba iray teo amin'ny loha laharana izy ary avy eo dia natsipin'i Bedouins teo amin'ny tany amina milina iray. Nolazainy fa mbola velona izy tamin'izany fotoana izany, fa ny Bedouins kosa nanipy vato teo amin'ny vatany, izay nahatonga azy ho faty.
Nofy ratsy nataon'i Salem taloha
Salem dia nanamarika ny alahelony tamin'ny alàlan'ny fahafatesany teo aloha izay nitovy foana. Ireo kalesin'adin-tserasera ireo dia nampirisika ny Bedouins na Syriana. Ny nofy dia hanomboka amin'ny "fahatsapana" ny fomba nanoloran'ny lehiben'ny dadany azy sy ny nahatratrarana ny Bedouins taminy. Ho azony avy eo ny sarin'ireo tranga nitarika ny fahafatesan'i Hasan Hamed. Nifoha i Salem tamin'izay fotoana izay nahavelomany ny fahafatesan'i Hasan.
Ny ray aman-dreniny dia nanandrana nampionona azy taorian'ny nofy Bedouin. Nahita ny reniny fa afaka mampitony azy fotsiny izy amin'ny filazana amin'i Salem fa tonga ny Sultan Pasha Atrash, sary an-kavanana. Mbola nanan-jato enina ambinifolo isan-taona izy na dia efa 23 taona tao 1968 aza izy ireo. Salem koa dia niaina aretin-tsaina rehefa nieritreritra ny fiainany taloha izy.
Ny nofin'i Bedouin an'i Salou dia mitovy amin'ny marenin'i James Leininger, izay i James kely namelona ny fahafatesany tamin'ny fianjerana fiaramanidina miaramila nandritra ny Ady Lehibe II. Mba hamerenana ity tranga ity, azafady mankany:
Salem Asa toy ny hoe Hasan hatrany hatrany, ny fiainany taloha Persona
Raha mbola teo anelanelan'ny efatra ka hatramin'ny dimy taona i Salem, dia hanao toy ny hoe Hasan izy. Raha nahita olona iray tamin'ny soavaly iray na tamin'ny basy iray izy, dia nilaza izy hoe "ity no soavako" na "ity ity ny basy». Avy eo dia nandositra tamin'ny tompony i Salem ary niezaka naka ny soavaly na basy avy amin'ity olona ity.
Indraindray izy dia nankany amin'ny varavaran'ny tranony ary nilaza hoe: "Ny fitaovam-piadiako dia ao ambadiky ny varavarana." Avy eo izy dia niezaka nanokatra ny varavarana mba haka ny fitaovam-piasany. Salem nanazava fa ny Hasan dia nitazona basy teo am-baravarankely iray tao ambadiky ny varavarana.
Ho zaza, Salem dia ho tezitra amin'ny fahitan'ny Bedouin. Nihasimba ny Bedouins ho lasa olon-dehibe. Indray mandeha rehefa niasa tao amin'ny tanàna iray niainan'ny Bedouins, mpiara-miasa iray, izay nahalala momba ny fahatsiarovany niainany taloha, dia nanesoeso an'i Salem fa ireo Bedouins ireo ihany no foko namono an'i Hasan. Izany dia nahatonga an'i Salem haka ady tamin'ny iray tamin'ireo Bedouins ary Salem dia nandresy ny Bedouin.
Salem dia nampiseho fahalianana goavana tamin'ny soavaly, izay tsy fahita firy satria tsy nanana soavaly ny fianakaviany ary tsy mahazatra ireo mpitaingin-tsoavaly tany amin'ireo tanànan'ny tendrombohitra Libanona, tahaka an'i Fallujah.
Raha mbola zaza i Salem, dia tsy nisy fanandramana natao hamotopototra ny zavatra niainany taloha.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha nataon'i Salem dia voamarina
Tao 1966, fony i Salem dia 21 taona, dia nandeha avy any Fallujah, Libanina mankany Krayye, Syria, lavitra kely noho ny 100 kilaometatra i Salem, mba hanatrika ny fandevenana ampahibemaso ny rahalahin'ny Sultan Pasha Atrash. Ny toerana nahafatesan'i Hasan dia manodidina ny 8 kilometatra atsimon'i Sweida ary Krayye dia atsimo kokoa, manodidina ny 12 kilometatra atsimon'i Sweida.
Kitiho ny sarintany mba hanitarana azy io, mba hankasitraka kokoa ny antsipirihany momba ny jeografia. Tadidio fa nianatsimo tany Beirut i Fallujah, ka ny lalana i Hasan sy ny rainy dia avy any Beirut ho Sweida, izay asongadin'ny oval fotsy.
Tamin'izany fotoana izany, tao 1966, nanapa-kevitra ny hamotopototra ireo fahatsiarovan-tenan'i Salem tamin'ny lasa izy ireo ary nahita fa nisy tanora tanora antsoina hoe Hasan Hamed tao Krayye, izay nifanandrify tamin'ny fanambarana farany nataon'i Salem, anisan'izany ny karazana fahafatesana.
Nandritra ny diany, niaiky i Salem teo amin'ilay lalana teo anelanelan'i Krayye sy Sweida izay nandraisan'ny Bedouins fanafihana Hasan ary namelezany azy tany ambadiky ny lohany. Tao amin'io toerana io, i Salem dia nahatsapa fanaintainana tany ambadiky ny lohany ary nametraka tànana teo izy.
Salem koa dia nahita ilay mozika izay natsangan'ny Bedouins ny vatan'i Hasan, na dia efa rava aza ny milina. Fantany ihany koa ny trano nipetrahan'i Hasan tany Krayye.
Ian Stevenson, MD dia nihaona tamin'i Salem Andary
Ian Stevenson, MD dia nihaona voalohany tamin'i Salem roa taona taty aoriana tamin'ny Martsa 10, 1968, fony i Salem dia 23 taona. Raha ampitahaina amin'ny trangam-pahatsiarovan-tenan'ny ankamaroan'ny ankizy nandritra ny androm-piainany taloha, izay nahitana ny fahatsiarovana ny fiainana taloha teo amin'ny fito taona teo ho eo, dia nilaza tamin'i Dr. Stevenson fa mbola nahatsiaro tanteraka ny fiainany taloha izy. Stevenson dia nanapa-kevitra fa ny fianakaviana Salem Andary sy Hasan Hamed dia tsy nanana fifandraisana ara-pianakaviana ary tsy nisy fifandraisana teo aloha.
Ny fiainany taloha ho an'i George sy i Amal Clooney
Ny fahalianana, ny dadan'i Amal Clooney dia an'ny foko Druze, izay manontany tena raha hanaiky ny vatana vaovao indray i Amal. Ny fiainana taloha ho an'i George sy i Amal dia navoaka. Raha hijery ireo dia mandehana mankany:
Firaisana ara-piraisana ara-nofo any Clark Gable | George Clooney sy Loretta Young | Amal Clooney
Fiovam-pirenena: Hasan Hamed dia Syriana avy any Krayye, fa i Salem dia teraka tany Fallujah, Libanona. Raha takatry ny olona fa afaka teraka any amin'ny firenena samihafa manomboka amin'ny andavanandrom-piainana iray hafa, ny ady sy ny fifandirana eo amin'ny firenena dia mety hanimba.
Fiainana ela velona: Vetivety taorian'ny nahaterahan'i Salem, ny reniny dia nanamarika teboka lehibe iray teo an-damosin'ny lohany, izay nifanitsy tamin'ny toerana nolazain'i Salem fa nandresy azy niaraka tamin'ny klioba iray ny Bedouin nandritra ny fanafihana an'i Hasan Hamed, ny fiainany taloha.
Fahatsiarovana jeografika: Niaiky i Salem ny toerana nipetrahan'ny Bedouins sy ny milina izay natsipy tao amin'ny vatan'i Hasan.
Loharano: Stevenson, Iana: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky III, Ireo tranga roa ambin'ny folo ao Libanona sy Torkia, University Press of Virginia, Charlottesville, pejy 159-174